Isbaheysiga Sacuudiga oo ku dhawaaqay Xabad joojin dagaalka Yemen - Jowhar Somali Leader
Home News Isbaheysiga Sacuudiga oo ku dhawaaqay Xabad joojin dagaalka Yemen
Isbaheysiga Sacuudiga oo ku dhawaaqay Xabad joojin dagaalka Yemen
Isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga ee dagaalka kula jira Jabhada Xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin, iyadoo arrintan qeyb ka tahay dadaalada Qaramada Midoobey ku dooneyso in lagu soo afjaro dagaalka 5 sano jirsaday ee ka socda dalka Yemen.
Xabad joojintan ayaa dhaqan galeysa maanta oo Khamiis ah, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Sacuudiga.
Waxaa la is weydiinayo sida xabad joojintan cusub ay ku dhaqan geli karto, maadaama dhowr jeer oo hore heshiis xabad joojin oo la gaaray ay burburtay.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Antonio Gutterres ayaa ugu baaqay dadka reer Yemen inay joojiyana dagaalka, isla markaana ay sare u qaadaan dadaalada looga hortagayo cudurka Coronavirus.
Isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa sanadkii 2015 qaaday weeraro cir iyo dhul oo ka dhan ah Xuutiyiinta oo xilligaas la wareegay inta badan dalka Yemen, waxaana Isbaheysiga uu taageerayay Dowladda ay aqoonsan tahay Beesha Caalamka.
Intii dagaalada ka socdeen dalka Yemen shantii sano ee la soo dhaafay waxaa lagu eedeeyay Isbaheysiga Sacuudiga inay galeen dambiyo ka dhan xuquuqda aadanaha, ayna duqeymaha ay wadeen ku dileen dad rayid ah.